Tag Archive for "२.०" - ‘२.०’ ले कमायो १ सय करोड !
‘२.०’ ले कमायो १ सय करोड !
काठमाडौं । बलिउडका दिग्गज अभिनेताद्वय अक्षय कुमार र रजनीकान्तले अभिनय गरेको फिल्म ‘२.०’ ले हिन्दी भर्जनबाट १ सय करोड कमाएको छ । यो फिल्मबाट अक्षयको सय करोड क्लबमा समाबेश भएको फिल्ममध्ये सबैभन्दा छिटो सय करोड कलेक्शन भएको फिल्म हो । फिल्म बिहारमा अत्यधिक सफल रह्यो । फिल्मले बिहिबार २०.२५ करोड, शुक्रबार १८ करोड, शनिबार २५ करोड, आइतबार ३४ करोड र सोमबार १३.७५ करोड कलेक्शन गरेको थियो । भने पाँच द... थप पढ्नुहोस्
६ साउन, काठमाडौं । अक्षय कुमार र रजनीकान्त अभिनित चलचित्र २.० एक पटक पुनः चर्चामा छ । यो पटक यसको कारण चलचित्रको गीत भएको छ । फिल्मीबिटका अनुसार यो चलचित्रमा बलिउडको सबैभन्दा ठूलो गीत छायांकन भइरहेको छ । गीतमा रजनीकान्त र एमी ज्याक्सनको रोमान्स देखिनेछ । एमी ज्याक्सनले यो गीतका बारेमा बताउँदै चलचित्रको गीत छायांकन गर्न १२ दिन लाग्ने बताइन । गीतको लागि छुट्टै ठूलो सेट तयार गरिएको छ । सुट सुरु हु... थप पढ्नुहोस्